Tattoo gacanta oo buuxa, dhammaan shakigaaga waa la xaliyay! | Tattoo
Tattoo gacanta oo buuxa, dhammaan shakigaaga waa la xaliyay!
Ma aha Cherry | | Tattoo gacanta
ka xaraashka Tattoo gacmeedka buuxa waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan, laakiin iyagu kama yarayaan taas. Hadday dhowr naqshadood la isugu geeyay goor dambe ama naqshad gaar ah oo laga sameeyay xoq, waxay yihiin nooc indho qabasho leh oo cajaa'ib leh.
Qodobkaan waxaan ku xallin doonnaa dhammaan shakigaaga ku saabsan kuwan xaraashka: Nooc noocee ah ayaa jira, naqshadahee ugu fiican, intee in le'eg ayey ku kacaysaa ...
1 Noocyada tattoos ee gacanta oo dhan
1.1 Tattoo gacanta oo buuxa ama tattoo gacmo
1.2 Gacan badh ama shaati gacmeed
1.3 Tattoo gacmaha
1.4 Cabbiraadaha Japan, adduun dhan
2 Waa maxay naqshadaha ugu fiican?
3 Qaar ka mid ah tusaalooyinka jirka oo dhan
3.1 Dhaqan ahaan
3.4 Xaqiiq ah
4 Mudo intee le'eg ayay ku qaadaneysaa in gacanta lagu wada sawiro?
5 Immisa ayey ku kacayaan?
Noocyada tattoos ee gacanta oo dhan
Tattoo gacanta oo buuxa o Tattoo gacmo
Aad loogu yaqaan ereygeeda ingiriisiga, Tattoo gacmo (macno ahaan 'gacmo tattoo', sababo muuqda awgood), Tattoo-yadaani waxaa lagu kala soocayaa iyadoo lagu daboolayo gacanta oo dhan, laga bilaabo garabka ilaa curcurka. In kasta oo ay adagtahay in la daboolo (in gebi ahaanba la sameeyo waxaad haysataa hal ikhtiyaar oo keliya: xir xirmo gacmo dhaadheer), iyagu waa nooc caan ah oo loo yaqaan 'tattoo'.
Tattoo gacan gacan o gacmo badh
Sida magacu tilmaamayo, tattoo gacmeed badh ayaa ka tagaya garabka ilaa xusulka. Iyagu waa ikhtiyaar ka cufan kuwa cududda buuxda, mararka qaarkoodna waa uun joogsi illaa inta cududda oo dhan la sawirayo (way adag tahay in la iska caabiyo marka aad bilowdo).
Tattoo gacan-badh ah… kaliya foorara. Fududeyntu waa mid ka mid ah meelaha ugu jilicsan uguna xanuun yar jirka marka ay timaado sawirka. Waxay sidoo kale qirtaan tattoos-ka daboolaya dhabarka iyo hore ee gacanta ama mid uun labada. Waa ikhtiyaar ku habboon bilowga, in kasta oo ay tahay in la yiraahdo ma sahlana in la daboolo.
Cabbiraadaha Japan, adduun dhan
Jabaaniyiinta, oo ay ugu mahadcelinayaan taariikhdooda weyn ee tatuurada, waxay leeyihiin shuruudo u gaar ah oo ay ula jeedaan cabbirada gacmaha. Haddii aad qorsheyneyso inaad midkood hesho, waa fikrad fiican inaad fiiriso iyaga:
Nagasoode: Tattoo-ka ugu ballaaran, oo aan u fahmayno sidii cudud dhan, tan iyo markii ay ka gaadhayso garabka ilaa curcurka.
hikae: In kasta oo qaybta laabta lagu xardhay illaa iyo sternum-ka lagu yaqaan magacan (dhaqan ahaan aaggan ayaa laga tagay oo aan la taaban), haddana waa wax iska caadi ah in hikae uu ka mid noqdo astaamaha gacanta oo buuxa.
Gobu: Tattoo-gaani wuxuu ku yaal shan qaybood oo ah gacmo-gacmeed buuxa, kiiskan oo ka sarreeya garabka.
Shichibu: Sidii kiiskii hore, wax yar uun baa ka weyn, maadaama ay yihiin 7 qaybood oo toban ah, taasi waa, khadku wuxuu ka yimaadaa garabka ilaa gacanta hore.
Waa maxay naqshadaha ugu fiican?
Naqshadeynta astaamaha gacmaha oo buuxa waxay ku xirnaan doontaa wax badan cabbirka aad ugu dambeyntii dooratay. Sidaa darteed, tattoo gacmo nus ah ma weydiisanayo naqshad isku mid ah sida mid buuxa. Taasi waa sababta la shaqeynta farshaxankaaga tattoo ay muhiim ugu tahay kiisaskaas. Isku day inaad hesho waxyaabo aad rabto inaad ku soo bandhigto sawirka iyo qaab guud oo gacanta oo dhan ah.
Aynu tusaale u soo qaadanno: Tattoo-ga caadiga ah ee gacanta oo dhan haya, waxaan dooran karnaa qaabka Jabaan. Si loo caawiyo farshaxanka tattoo si loo abuuro naqshad aan ku dareemeyno inaan si buuxda u aqoonsanay maahan oo kaliya inaan raadino sawirro, laakiin sidoo kale ka fikirno walxaha aan dooneyno inaan ka muuqano. Maaddaama aan nahay qaybta ugu muhiimsan ee tusaalaheena waxaan dooran doonnaa kaarbooti sidoo kale waxaan ku wehelin doonnaa waxyaabo kale oo ka mid ah qaabka Jabbaan: hirarka, ubaxyada cherry iyo chrysanthemums. Waxaan sidoo kale go'aan ka gaari doonnaa haddii aan dooneyno midab ama madow iyo caddaan.
Inbadan oo aan calalino waxaan siineynaa tattooist-ka naqshadeynta, way sahlanaan doontaa inay abuurto tattookeena ugufiican. Sikastaba, haddii farshaxanka tattoo uu leeyahay fikrado, dhagayso isaga, ka dib oo dhan isagu waa xirfadle!
Qaar ka mid ah tusaalooyinka jirka oo dhan
Habka dhaqameedku wuxuu umuuqdaa mid aad u fiican loogu talagalay gacmo-gacmeedka oo jaleecada hore marka lagu daro waxyaabo u muuqda inaysan waxba wadaagin.
Teendhooyinka, ubaxyada cherry, samurai iyo xitaa ubaxyada ama qaababka joomatari ee ku dayashada kimonos ... Qaabka Jabbaan ee gacanta oo dhan ayaa ah mid indhaha soo jiidanaya oo awood badan.
Fikrad kale oo ah in lagu sawiro gacantaada oo dhan waa in la isticmaalo naqshad joomatari ah. Ama qaab saafi ah oo fudud ama ku dheehan mandalas, natiijadu waa mid aad u hypnotic.
Habka dhabta ah ayaa sidoo kale cajiib ah haddii aad doorato naqshad ballaaran oo qaadata gacanta oo dhan. Xayawaanka, dadka, muuqaalka muuqaalka iyo muuqaallada ayaa nolosha ku soo noolaan kara maqaarkaaga.
Ugu dambeyntii ubaxyada sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo si fiican u eg curcurka weyn ee garabka tattoo. Hadday yihiin kuwo macquul ah, midab, madow iyo caddaan, aragti ama ujeeddo-yahan, hal hal ama inbadan oo isku-darka ah, sawir leh ubaxyo sida jilaayaashu hubaal u eegi doonaan.
Mudo intee le'eg ayay ku qaadaneysaa in gacanta lagu wada sawiro?
Waxay kuxirantahay wax badan, iyo gaar ahaan farshaxan kasta oo tattoo ah, in kasta oo waxa ugu badan ee caadiga ahi yahay inay qaadato toban kal-fadhi. Ahaanshaha meel aad u ballaaran, gacanta laguma sawiri karo hal kulan. Waxaad u baahan tahay dhowr oo kala fog si aad u awoodo inaad ka shaqeyso qeexida, hooseynta, midabka ... isla markaana sii wakhti ay ku bogsooto inta u dhexeysa kal-fadhiyada.
Immisa ayey ku kacayaan?
In kastoo Waxay kuxirantahay qodobo badan (tusaale ahaan, sida loo codsaday farshaxanistaha, waddanka aad joogto, haddii uu yahay madow iyo caddaan ama midab, haddii uu yahay naqshad asal ah ...) Waxaad filan kartaa tattoo nus gacan ah inuu kugu kaco ku dhowaad kun doolar. Kuwa gacanta oo dhan ku kici kara in ka badan laba kun.
Dabcan Qiimayaashani waa ku dhowaad, farshaxanle kasta oo tattoo ah ayaa kaa dhigi doona inaad bixiso waxa uu u arko inuu caddaalad yahay.
Tattoo gacmeedka buuxa waa mid aad u fiican, oo lagu daray, waxaad haysataa kumanaan ikhtiyaarro ah oo kugu habboon. Noo sheeg, ma haysaa wax tattoos ah qaabkan? Xusuusnow inaad noo sheegto waxaad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo gacanta » Tattoo gacanta oo buuxa, dhammaan shakigaaga waa la xaliyay!
Tattoos si loo xasuusto aabbaha dhintay